Ithegi: izixhobo | Martech Zone
Izixhobo musa ukwenza isiphawuli
NgoMvulo, Aprili 25, 2016 NgoLwesibini, Aprili 26, 2016 Douglas Karr
Sibeka isindululo esibalulekileyo phambi kwethemba eliza kwakha iqela labo lokukhangela. Esi sicwangciso sidibanise sobabini ukulawula abathengi babo kunye noqeqesho lweqela labo langaphakathi ukuze babe nobuchule kuphando lwezinto eziphilayo. Sinikezele ngophicotho lwethu olupheleleyo lwesiza, uxwebhu lwephepha lama-50 + olubandakanya itoni yezandla kuqeqesho kunye nabahlalutyi bethu kunye neengxelo ezivela kwindibaniselwano yezixhobo esinelayisensi yazo. Yayiyicatshulwa efanelekileyo… kodwa ke yeza
Kule veki, umthengisi ovela kwiqonga le-sweepstakes undibambile. Sibe nobudlelwane bokucima kunye nokucima kunye nenkampani iminyaka embalwa ngoku. Ndizibonile iidemo malunga nendlela yokusebenzisa isoftware yazo; Banomfanekiso olula weetemplate, kunye neetoni zokudityaniswa kwamandla. Kubonakala ngathi liqonga elithembisayo. Sifuna ukunciphisa ukhuphelo lwethu lokusebenza olukhutshelweyo ukusukela oko iBluebridge yenze umsebenzi oncomekayo kwiselfowuni
9 Abenzi be-infographic ekwi-Intanethi kunye namaqonga
NgoLwesine, Meyi 28, 2015 NgoLwesithathu, Meyi 5, 2021 Douglas Karr
Umzi mveliso we-infographics uyaqhuma kwaye ngoku sibona izixhobo ezitsha zokunceda. Okwangoku, iiarhente ze-infographics zibiza phakathi kwe- $ 2k kunye ne- $ 5k kuphando, uyilo kunye nokukhuthaza i-infographic emnandi. Ezi zixhobo ziya kwenza uphuhliso lwe-infographics yakho ibe lixabiso eliphantsi kakhulu, kube lula ukuyila kunye nokupapasha, kwaye ezinye zibandakanya iimodyuli zokunika ingxelo ukubona ukuba i-infographics yakho isasazwa kwaye ikhuthazwa kangakanani. Ezinye zazo zincinci kwaye kuya kufuneka ujongane nazo
Iindidi ezisixhenxe zeNtengiso yeDijithali
NgoMgqibelo, Disemba 21, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu kwi-Optify babelane nge-infographic okwethutyana kwaye sivele nje sabelana ngayo. Olu jongo luhlekisayo kwiindidi ezisixhenxe zabathengisi bedijithali. Ngelixa ndithanda uburharha, kukho inkxalabo engaphantsi yokuba i-infographic inyusa ngokwenene ... abathengisi bathanda ukwenza oko bonwabileyo kuko. Sijonge njengokuba abathengi bethu beqhubeka nezixhobo kwizicwangciso ezingasebenziyo - kuba bekhululekile